အခုတော့ Holmes သဘာဝတရားနိုး! | Holmbygden.se
အခုတော့ Holmes သဘာဝတရားနိုး!
အပေါ် Posted6မေ, 2017 အားဖြင့် Holmbygden.se
ယခုရွှေ့ပြောင်းသောငှက်များသို့ပြန်လာ, သူတို့ဖြစ်ကြသည် 10 ငါတို့သည်ငါတို့၏ပွညျ၌ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းရှိခဲ့ထက်အဆကျပို. ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ယခု Blackbird ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Titti နှင့်ဂျော်ဂန် Olsson ခဲ့သည်, Östbyn, သောပထမဦးဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်; 12/3. အဲဒီနေ့ရက်သတ္တပတ်လည်းသူတို့အသက်သေပြ chaffinch. ပထမဦးဆုံးvårbesökenရရှိသွားတဲ့သောဧရိယာ၌ငှက်အစားအစာဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်. ဤတွင် Navarn မှာ (300 MOEH) ဒါဟာသည်အထိမဟုတ်ခဲ့ 19/3 ပထမဦးဆုံး Blackbird မရောက်မှီ.
တစ်နှစ်ခွဲလွန်ခဲ့တဲ့အဘို့ငါအဘို့အကာအယူခံဝင်လုပ် Birds ဂိမ်းနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ Holmes Bygdens ပင်မစာမျက်နှာမှာ (ထို့ပြင်ဆလိုက်မဂ္ဂဇင်းအတွက်). Titti Olsson, Östbyn, နှင့်အာနိုး Johansson, Långliden, တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားမှုပြတဲ့သူတွေကိုခဲ့ကြသည်.
အာနိုး (82) တစ်ဦးတောအုပ်နှင့်ဇီဝဗေဒပညာရှင်ဝါသနာခဲ့, တူညီတဲ့အရပျ၌နေရာထိုင်ခင်း, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက. ငါဧပြီလသူ့ကိုသွားရောက်ခဲ့ 2016 နှင့်သူ၏သဘာဝဒိုင်ယာရီထုတ်ချေး. သူကမှတ်ချက်ချထားပါတယ် 20 အကြားLånglidenအတွက်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသည့်ရက်စွဲvårfåglars 1951-2011. 60 တစ်နှစ်မှတ်စုသိပ္ပံ Mellannorrland နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိလိမ့်မည်. ဤတွင်ကျနော်တို့ဘယ်လိုသီဆိုဇီးတွေ့နိုင်ပါသည်, Lapwings ယခုနွေဦးကာလအတွင်းပထမဦးဆုံး Liden အတွက် Blackbird နဲ့ chaffinch ဖြစ်ကြမယ့်အစား, အလွန်ရှားပါးတဲ့ / နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနှင့်. အာနိုးရဲ့ဒိုင်ယာရီတွင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆွီဒင်မျိုးစိတ်သစ်သတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုတင်သွင်းထားပြီး (Uppsala အတွက် SLU). ဆွီဒင်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် (SLU) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fenologiprojekt စတင်ခဲ့ပါပြီ (တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် "နွေဦး၏ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ") သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌. ဒါဟာပထမဦးဆုံးလိပ်ပြာကပါဝင်ပတ်သက်, ပျားပိတုန်း, နှင့်, ပန်းပွင့်, ငှက်ဆိုက်ရောက်, ထိုဒေသတွင်နွေးထွေးမီလီမီတာ (လယ်ကွက်) သငျသညျအသကျရှငျ. ဤသည်ဆွီဒင် / ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ရာသီဥတုအတွက်အောက်ပါအပြောင်းအလဲများကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
Titti နှင့်ဂျော်ဂန် ထို့အပြင်အတော်ကြာအခါသမယအပေါ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဧပြီလကတည်းကHolmsjön၏မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် infields အပေါ်မိုဃ်းမလင်းမှီမှာဦးချိုမြည်နှင့်မြေကြီးမြည်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်! Christine "Titti" Olsson, Östbyn, အဘယ်သူ၏ဖခင် Sundsvall F.D. နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့. မှာ "ငှက်ဒဏ္ဍာရီ" 80- 90 talet.Nils Lundmark, ချက်ချင်းအတွက်လေ re-တည်ထောင်ရန်သူတို့ရဲ့ငှက်အကျိုးစီးပွားချင်ခဲ့တယ်. Nisse, သူကိုသေဆုံး 2006, Holmes အတွက်အချိန်တက်တွေအများကြီးကြာအောင်- မြည်၏စာရင်းနှင့်လက်စွပ်နှင့် Liden ဧရိယာနှင့် 80-90 ရာစုအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧရိယာထဲမှာနှစ်ရာလမ်းခွဲတက်ထား (မြည်နှင့် Dipper). Sina လက်အောက်တွင် 60 တက်ကျော်တစ်ဦး ornithologist ထား Nisse အဖြစ်နှစ်ပေါင်း 1600 သေးငယ်တဲ့ငှက်လမ်းခွဲနှင့် ပတ်သက်. 400 မြည်. သူကကျော်တန်းဖြစ်၏ 12.000 ငှက်တို့သည်.
Holmes အတွက်Årsvädretမန်များအဘို့အဆင်သင့်ခဲ့ (ဒါ့အပြင်သစ်ပင်ပန်းမန်). သြဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလပုံမှန်ထက်ပူနွေးခဲ့သည်နှင့်တောင်ကုန်း၏ရှင်သန်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ပုံမှန်နွေရာသီကာလအတွင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြ. ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်ရှင် တွင် ပထမနှစ်တွင်တစ်အမှိုက်သရိုက်များအနေဖြင့်ယင်း. ယခုပြောင်းရွှေ့ဆောင်းဦးအတွက်လွှဲပြောင်းယူအရှိဆုံးအထိခိုက်မခံမတိုင်မီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်.
အဆိုပါ undersigned ကတည်းကဧရိယာ၌မွေးမြူရေးငှက်တစ်ဦးစာရင်းရှိပါတယ် 2000 (Storsten ပုရွက်ဆိတ်မှာတက် Storflon မှာ, ဗိုက်ကင်း၏မြောက်ဘက်) နှင့်Lokåsen Nordanede အတွက် (Holmes ၏တောင်ဘက်).
ပြီးခဲ့သည့်အတွက်သိုလှောင်မှုအပေါ်ဦးဆောင်သူ4နှစ်ပေါင်းလာမယ့်ရန်အကွက်တူအောင်. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ်တောနယ်မြေများမှဖြစ်ကြောင်း, ဤ 16 ငှက်တို့သည်အကြောင်းကိုပါဝငျ 80 % Holmes ရဲ့သစ်တောတွေထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့၏အမျိုးအ.
အောက်ကနောက်ဆက်တွဲ 13 ယခုနှစ်ကာလအတွင်း Holmes မှာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံသူတွေကို (7 Sundsvall အတွက်နေရာထိုင်ခင်း!!?). ဒီနေရာတွင် Holmes အစီရင်ခံဘာအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်.
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စဉ်အတွင်းသင့်မျက်မှောက်ဘို့စောင့်ဆိုင်း 2017. Holmes အတွက်သဘောသဘာဝတွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်တဲ့သတင်းထောက်ဖြစ်လာမှဘာလုပ်ရမှန်း Titti ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်. ကျနော်တို့နောက်ထပ်သင်ကူညီ.
Holmes အစီရင်ခံသောငှက်များ 2016
ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, "ငှက်ရှားပါးမှု", ရုံ 10 % နွေရာသီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ. အနားမှာ box ကိုကြည့်ရှုပါ.
တချို့ကအထူးလေ့လာတွေ့ရှိချက်စဉ်အတွင်း 2016 ဖြစ် ရွှေလင်းယုန် မြောက်ဘက်Holmsjön၏သစ်တောထဲမှာအသိုက်ရာသီ. Titti နှင့်ဂျော်ဂန်ဈရှိÖstbyn kestrels နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်မြေပေါ်တွင်တစ်ဦးငှက်အသိုက်ထဲမှာအသိုက်. ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်နွေဦးအတွက်ယခုများမှာ 2017 နှစ်ဦးစလုံးရှိခဲ့ မြေဆီလွှာကိုဇီးကွက် နှင့် hornuggla ၎င်းတို့၏နေအိမ်များအနီးတွင်Holmsjönမှာ Meadows.
အားနည်းချက် / မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသောငှက်များ, Holmes အတွက်ဘုံ
ရှိMiljödepardementet, အီးယူကနေတဆင့်, အက်စ် K သည် en. အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များသက်ဆိုင်ကြောင်းအနီရောင်များစာရင်း- နှင့်ခြိမ်းခြောက်မျိုးစိတ်växtarterterဥရောပစာရင်း.
အနီးခြိမ်းခြောက် (အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲအတွက် NT)
အားနည်းချက် (အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲအတွက် Vu)
အဆိုပါအတော်ကြာ အနီးခြိမ်းခြောက် နှင့် အားနည်းချက် ငှကျတို့ Holmes ဧရိယာထဲမှာအတော်လေးကောင်းသောရှင်သန်မှုဧရိယာရှိ.
PDF ဖိုင် format နဲ့အဘို့ကို attachment ကျယ်သို့မဟုတ်ကြည့်ဖို့နှိပ်လိုက်: အားနည်းချက်နှင့် Holmes အတွက်ခြိမ်းခြောက်မျိုးစိတ်အနီး
ပတေရုသ Berglund 070-5880994 peter.berglund50@gmail.com
Titti (Christine) Olsson 070-6300617 hristin.olsson@skola.sundsvall.se
အဆိုပါရည်မှန်းချက်ထိုဒေသတွင်တွေ့ရသောမျိုးစိတ်များ၏ပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့ပိုကြီးတဲ့ကွန်ယက်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါသည်. extension ကိုအသုံးပြုပုံကွန်ယက်နို့တိုက်သတ္တဝါများတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်, မြောက်ပိုင်း taiga နေရင်းဒေသများရှိအခြေအနေတစ်ခုပြည့်စုံရုပ်ပုံရဖို့အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်အပင်. ကျနော်တို့သဘာဝစောင့်တပ်ဖွဲ့တိုးချဲ့နိုင်အောင်ဒါပေမယ့်သိရန်သင်ကပေးရအကြောင်း.